Garoowe: Machadka Hayaan oo Garowe ka Daahfuray Wajigii Kowaad ee Barnaamijka Safarka Nabada • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Garoowe: Machadka Hayaan oo Garowe ka Daahfuray Wajigii Kowaad ee Barnaamijka Safarka Nabada
Tagged With: safarkanabadda
Garoowe: Machadka Hayaan oo Garowe ka Daahfuray Wajigii Kowaad ee Barnaamijka Safarka Nabada
July 13, 2019 - By: Omar Akhyaar
Magaalada Garoowe ee xarunta Puntland, waxaa maanta oo Sabti ah [July 13, 2019] lagu daah furay wajiga koowaad ee mashruuca Safarka Nabadda, kaasoo ay fulintiisa iska kaashanayaan Machadka Hayaan ayna maal gelinayso Dowladda maraykanka
Barnaamijka oo ka kooban labo qaybood oo kala ah tababarro la siinayo dhallinyarada iyo barnaamijyo wacyigelin ah oo ka baxaya idaacadaha, waxay ujeedadiisu tahay sidii dhallinyarada loogu baraarujin lahaa qiimaha nabadda, islamarkaana loogu diyaarin lahaa inay noqdaan kuwo u ololeeya dhismaha nabadda, kahor taga rabshadaha iyo gacan-ka-hadalka.
Xafladda furitaanka oo ahayd mid si weyn loosoo agaasimey waxaa kasoo qayb galay ku dhowaad boqol qof oo dhallinyaro u badnaa, mas’uuliyiin ka socda Xukuumadda Puntland, Baarlammaanka, xubno metelayey ururrada bulshada iyo mas’uuliyiin ka tirsan machadyada cilmi baarista ee PDRC iyo Hayaan.
Furitaanka waxaa la siiyey Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Xasan oo kamid ah culimada waaweyn ee Puntland, sheekhu wuxuu goobta ka jeediyey baraarujin diini ah, taasoo uu si gaar ah ugula dardaarmay dhallinyarada gaar ahaan kuwa loo carbinayo in ay noqdaan safiirrada nabadda, isagoo ku boorriyey inay dhismaha nabadda xil weyn iska saaraan, maadaama dhallinyaradu yihiin cidda u horraysa ee ku lug yeelata falalka amniga lidka ku ah.
Ismaaciil Xaaji Siciid oo ka tirsan Machadka Hayaan islamarkaana ah madaxa mashruuca ayaa si kooban u sharraxay ujeedada barnaamijkan iyo qorshaha laga leeyahay. Isagoo carrabka ku adkeeyey in danta ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay sidii loo yarayn lahaa rabshadaha dhallinyarada dhex mara, loona soo saari lahaa jiil cusub oo da’yar ah oo ka shaqeeya una ololeeya nabadda.
Casharrada ugu muhiimsan ee inta uu barnaamijkani socdo ardayda la bari doono ayuu xusay inay ugu muhiimsan yihiin: ka fogaashaha rabshadaha, isu tanaasulka, is maqalka, is qadarinta iyo xallinta khilaafaadka.
Wasiir ku-xigeenka Wasaarada Shaqada, Shaqaalaha, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Puntland Axmed Cabdiraxman oo isagu si rasmi ah barnaamijka u daahfuray, wuxuu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in da’yarta la baro qiimaha nabadda iyo hababka khilaafaadka loo xalliyo, isagoo carrabka ku adkeeyey in Dowladda Puntland ay soo dhoweynayso barnaamijka Safarka Nabadda ayna ku baaqayso in lasii dardargeliyo.
Xildhibaan Awees oo ah xildhibaan da’yar oo ka tirsan Baarlammaanka Puntland ayaa dhankiisa ugu baaqay dhallinyarada tababarka loo furay in ay mas’uuliyad weyn isa saaraan, duruusta la bari doonana aysan dayicin balse ay dalkooda iyo dadkooda ugu faa’iideeyaan. Xildhibaanku wuxuu ka digay in dhallinyaradu ku milmaan afkaarta siyaasiga ah ee is diiddan, ayna ka taxadaraan inaysan noqon kuwo dhinacii la rabo loo jeediyo.
Xubnaha kale ee madasha ka hadlay waxaa kamid ah ahaa Guddoomiyaha Dallada Ururrada aan Dowladda Ahayn ee Puntland [PUNSAA], Faysal Axmad Warsame
Guddoomiyaha Dallada Dhallinyarada Puntland ee [PAYAN] Liibaan Maxamad Xuseen
Guddoomiyaha Dhallinyarada Ciyaaraha ee Nugaal, Siciid Cabdi Xasan Faadumo Diiriye oo ka socotay , Ururka Haweenka ee Talo Wadaag
Gababa gabadii, waxaa ka qayb galeyaasha tababarka oo ka kooban 50 qof loo kala qaybiyey saddex kooxood, iyadoo kaddib loo qori tuuray kooxda lagu bilaabayo tababarka. Saddexda kooxood oo ay tiradoodu tahay 16 16 18, waxay qolo kastaa qaadan doontaa tababar socon doona muddo afar maalmood ah